Liibiya: Inka badan 150 Muhaajiriin Tahriibayaal oo laga badbaadiyay kooxo Burcad ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Liibiya: Inka badan 150 Muhaajiriin Tahriibayaal oo laga badbaadiyay kooxo Burcad ah.
Liibiya: Inka badan 150 Muhaajiriin Tahriibayaal oo laga badbaadiyay kooxo Burcad ah.
Ciidamada Amaanka Liibaya ayaa weerar qarsoodi ah oo ay ku qaadeen xabsi qarsoodi ah oo ku yaala koonfur-bari dalkaaasi liibiya ayaa ku guuleystay in badbaadiyaan 156 ruux oo ay 15-ka mid ah yihiin haweenka .
Howlgalkan oo ka dhacay magaalada Kufra ayaa dhacay 16-kii Febraayo kadib markii mid ka mid ah tahribyaasha uu xabsiga ka baxsaday isbuucii lasoo dhaafay iyadoo loo wareejinayo goob kale oo la doonayay in la xiro .
Liibiya waxay gashay fowdo ka dib kacdoonkii 2011 ee lagu riday laguna dilay hogaamiyihii mudada dheer Muammar Gaddafi. Waddanku wuxuu u kala jabay dowlad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo fadhigeedu yahay caasimadda, Tripoli, iyo kooxo kale ee kasoo horjeedo.
Previous articleBulshada Xudur oo kacabanaysa ciriiriga ka jira helidda biyaha xareedda War-caday+(SAWIRRO).
Next articleMaamulka Cisbitaalka Samareeb oo la wareegay Agab caafimaad+(SAWIRRO).